औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्र्धन गर्न सुझाव
२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, निर्वाचनपछि दलहरूले लगानीको वातावरण बनाउन खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर निर्वाचनपछि दलहरूले लगानीको वातावरण बनाउन खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । कतिपय नीति नियमकै कारण मुलुकभित्र आएको खर्बौंको वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ भने स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्न नसकेर आन्तरिक स्रोत साधन खेर गइरहेको अवस्था पनि छ ।
अमेरिकाले दिएको ५२ अर्बको निःसर्त अनुदान उपयोग गर्नैपर्छ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला अहिले अमेरिका सरकारको मिलियन च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) द्वारा अघि बढाउन लागेको परियोजनाको नेपाल संयोजक छन् । २०४७ सालमा सडक विभागको हाइवे इन्जिनियरबाट जागिरे जीवन सुरु गरेका ६० वर्षीय सिटौला एमसीसीमा अगस्ट २०१६ मा यातायात विज्ञका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट सिभिल इन्जिनियरमा स्नातक उत्तीर्ण सिटौलाले आईआईटी भारतबाट परियोजना व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन स्पष्ट हुनुपर्छ
नेपालको विकास आयोजना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट पाउने वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट कुल १ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरेको छ । जसमा वैदेशिक सहायता अनुदानको हिस्सा ४२, ऋणको हिस्सा ३९ र प्राविधिक सहायताको हिस्सा १९ प्रतिशत रहेको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ई–फ्याक्टरभन्दा आई–फ्याक्टर बढी महत्वपूर्ण
१५ वर्षको बैंकिड क्यारियरमा एनआईसी एसिया आफ्नो चौथो बैंक भएको बताउने एनआईसी एसिया बैंकका मानव संशाधन प्रमुख गौतम डंगोल आई (इन्ट्रेस्ट) भरसेस् ई (एक्स्पिरियन्स) फ्याक्टरलाई विश्वास गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एच आरमा धेरै वर्ष बिताउनेचाहिँ आई–फ्याक्टर हुन् र बैंकिङमा अनुभव भएका चाहिँ ई–फ्याक्टर हुन् । वर्तमान समयमा अनुभव भएर मात्र नहुने इच्छा पनि हुनुपर्ने उनी इच्छा नै नभए अनुभवको अर्थ नहुने बताउँछन् । एचआर सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आलोचनात्मक तथा संवेदनशील इनपुट हो भन्दै उनी निर्जीव मेसिनमा भन्दा पनि सजीव र संवेदनशील मान्छेहरूले भरिएको हुनाले मानव संसाधनको क्षेत्रमा सम्झौता गर्ने तरिका छुट्टै हुनुपर्ने धारणा बोकेका उनले कारोबारसँग गरेको कुराकानीको सार :
नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ
मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा प्रमुख क्षेत्रमध्येको बिमाको बजार विविध कारणवश सीमित रहेको छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेझैं बजार तथा पेनिटेसन भने बढेको पाइएको छैन । बिमाको प्रभावकारिताका लागि राज्यदेखि समिति मात्र नभई बिमा कम्पनी तथा यस क्षेत्रका अभिकर्ताहरू पनि सजग हुन आवश्यक छ । यसको भूमिका बढाउन, बजार विस्तार गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बिमाक्षेत्रका विज्ञहरू डा. रवीन्द्र घिमिरे र डा. दामोदर बसौलासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
बिमा क्षेत्रका चुनौती
प्रदेश राजधानी कहाँ हुनुपर्छ ?
एकपटक बन्ने प्रदेशको राजधानी वर्षौंसम्मका लागि हो, तर सतहमा अहिले केही जिल्लाका मानिसले भने प्रदेश राजधानीको माग दिनहुँ रूपमा मुखरित गरिरहेका छन् । तथापि, सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको भौगोलिक तथा पूर्वाधारजन्य अवस्था अध्ययन गरेर प्रदेशका सम्भावित राजधानीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । चर्चामा आएअनुसार अहिलेका देशका सहर बनेका स्थानमै प्रदेश राजधानी बन्ने कुरा मोटामोटी रूपमा बाहिर आइसकेको पनि छ । संविधानले सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकार सहभागी भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै आरोप लगाउन सकिन्न
१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल देशकै सबैभन्दा पुरानो उद्योग हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको गौरव बोकेको यो उद्योग आफैंले भने निकै उतारचढाव बेहोरेको छ । पछिल्लो पटक झन्डै चार वर्षदेखि बन्द रहेको यो उद्योग अनेकौं प्रयासपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत्भार कटौतीका कारण जुट मिल पटक–पटक बन्द भएको थियो । उद्योगको स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । पुनः उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र एक वर्षमा १० हजार प्रत्यक्ष तथा १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्र्नेसहित उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । अहिले जुटमिलको अध्यक्ष रहेका वसन्त वन उद्योग अब कहिल्यै बन्द नहुने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । सरकारका विभिन्न तहमा रहेर काम गरेका अध्यक्ष वनसँग उद्योग सञ्चालन र वर्तमान अवस्था, उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सेयर विवाद र रोजगारीका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
कांग्रेसले फलाम गाल्ने राप सहनुपर्छ
फलाम गाल्ने रापले कांग्रेसलाई पोलेको छ । कांग्रेसभित्र धेरै समस्याका प्वालहरू थिए । ती प्वालहरू टालटुल गरेर पार्टी सुध्रने सम्भावना पनि थिएन । त्यसैले यो एउटा अवसर भएर आएको छ । कांग्रेसले यो रापमा आफूलाई गलाएर पुनः नयाँ, भव्य र सुन्दर आकृतिमा निर्माण गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार गत वर्ष फागुनमा स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि संघीयताको प्रारूप कोरिएको हो । स्थानीय तह गठनसँगै भएको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार इतिहासमा पहिलो पटक बनेको छ । यसपछि भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका तीन तहका सरकार बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढेको छ । यससँगै नेपालमा संघीयताको आधारभूत जग बसेको छ ।
स्मार्ट सिटी, कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी नै मेरा प्राथमिकता हुन्
कर्णाली अञ्चल अथाह प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ । स्थानीय स्तरमा निर्मित साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दा कर्णालीको विकास हुन सकेको छैन । जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार मानिने कर्णालीवासी जनताले अझै पनि गाँस, बास र कपासका लागि लडिरहनुपरेको समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर कर्णालीको नाममा आउने अर्बौं रकम कहाँ गयो भन्नेमा कर्णालीवासी नै अन्योलमा छन् ।
बैंकिङ बिजनेस ग्याम्बलिङ होइन
चार पटकसम्म निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका जनक शर्मा पौड्यालले केही समयअघि मात्र ग्लोबल आईएमई बैंकको व्यवस्थापन नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नबिल बैंकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएका पौड्यालसँग तत्कालीन एनआईसी बैंक स्थापना कालदेखि काम गरेको अनुभव छ । त्यसो त पौड्यालसँग लक्ष्मी बैंक स्थापनाको अनुभव पनि छ । नबिल बैंकमा मात्रै करिब ११ वर्ष बिताएका पौड्यालले ग्लोबल आईएमई बैंकमा पनि १० वर्ष बिताइसकेका छन् ।